June 24, 2020 1263
मेष(चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)-केही समस्या देखिए पनि आँटेको काम सम्पादन हुने समय छ। प्रयत्न गर्दा साथीभाइसँगको असमझदारी सम्झौता’मा टुंगिनेछ। दिगो योज’नाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त हुनेछ। कृषि तथा पशुपाल’नबाट प्रशस्त फाइदा मिल्नेछ। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम समेत बनाउन सकिनेछ।
वृष(इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)- अवसरले पछ्याए पनि चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। व्याहारिक समस्याले याे’जना रोकिन सक्छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दु:ख दिनेछन्। मिहिनेतकाे नतिजा चित्तबुझ्दाे नआउन सक्छ। बलजफ्ती गर्ने बानी_ले आफैंलाई समस्या निम्त्याउन सक्छ। पहिलेका सहयोगीह_रू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन्। साथी_भाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। लगनशीलताले मात्र लक्ष्यमा पुर्याउनेछ।
मिथुन(का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)- बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अ_वसर प्राप्त हुनेछ। चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। पहिलेका कमजोरीला_ई सुधार्ने मौका छ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिला’उनेछ। मान-सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ। सम्पादित कामबाट धन लाभ हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नु_का साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ।
कर्कट(हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो)- काम’ना पूर्ण हुनेछ भने रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ। आफ’न्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वा’दिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। लक्ष्यअनुसार समयमै काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। काममा विशेष अव_सर प्राप्त हुनेछ। पहिले_को सफलताले पनि हौसला जगाउनेछ। व्यापारमा मनग्य फाइदा हुनेछ।
सिंह(मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)- आक’स्मिक खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। आम्दानीका स्रोत भने कमजोर बन्नेछन्। बेलैमा होस नपुग्ना__ले फाइदा गुम्न सक्छ। काममा हस्तक्षेप गर्नेहरू कमजोर हुनेछन्। करकापमा गरिएको निर्णयले पनि अन्तत: फाइदै हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूको क_मजोरीबाट लाभ उठाउने मौका पाइनेछ। खर्च लागे पनि प्रयत्न गर्नेहरूलाई यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
कन्या(टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो)- नयाँ अवस’रका साथै आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। पढाइमा ध्यान केन्द्रित हुनाले प्रग’ति हुनेछ। प्रतीक्षित नति’जाले उत्साह जगाउनेछ। व्यापारमा थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ। नयाँ काम’तर्फ अग्रसर भइनेछ। आम्दानी बढ्नाले जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ।
तुला(र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)- सामा’न्य कामका लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्नेछ। तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नुपर्ला। परिबन्धले चुनौती निम्त्याउन सक्छ। ठूलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गुम्न सक्छ। अरूका विषय’मा चासो लिँदा व्यर्थैमा झ’मेला बेहोर्नुपर्ला। घरेलु समस्या सुल्झाउन समय लागे पनि सामा’जिक कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ। पेसा–व्यवसायमा उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ।
वृश्चिक(तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)- अवसर र चुनौती एकसाथ देखा पर्ने हुँदा होसियारीसाथ काम’मा जुट्नुपर्ला। छिद्र खोतल्नेहरूले दु:ख दिनेछन्, विशेष योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको साथ–सह”योगले अप्ठ्यारा चुनौती समेत पार लगाउन सकिनेछ। सामाजिक जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ। नयाँ कामको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। समाजसेवा, धर्मकर्म र परोप’कारी काममा प्रवृत्त भइनेछ।
धनु(ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)-परिस्थि’तिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा काममा समय लाग्नेछ। अस्वस्थता र कमजोरी अनुभूति हुनेछ। चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। हुलमुलमा धनमाल गुम्न सक्छ। खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव मह’सुस हुनेछ। अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ला। आक्षेप लगाउ’नेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू’ कमै भेटिनेछन्। उपचारमा खर्च हुने समय छ।
मकर(भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि)- लोकाचारका लागि अनावश्यक वस्तुका पछि दौडनुपर्ला। यात्रा र आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। वचन पूरा गर्न नस’क्दा आलोचित भइनेछ। परि’स्थिति र सम्बन्ध अनुकूल बना’इराख्न व्यवहारमा सजग रह’नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहि’नेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। बिछोडिए’का परिवार’जनसँग भेटघाट हुनेछ।
कुम्भ(गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)- वैधानिक प्रावधानले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पार्नेछ। अधिकार’का लागि सजग रहनुपर्ला। प्रतिस्पर्धी बढ्नाले केही चुनौ’तीहरू देखिनेछन्। काममा बाधा पुर्याउ’नेहरू प्रशस्तै हुनेछन्। विवाद तथा मुद्दाह’रूमा आफ्नो पक्ष कमजोर रहनेछ। तापनि मिहिनेतले नियमित काम बन्नेछन् र सामान्य फाइदा पनि हुनेछ। प्रयत्न गर्दा भौतिक सुविधाका वस्तुहरू जुटाउन स’फलता मिल्नेछ।
मीन(दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)- काम’को मेसो नमिल्दा केही पछि परिएला। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। परिबन्धले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। आफ्नो प्रतिफल’बाट अरूले फाइ’दा उठाउन सक्छन्। तापनि लगनशीलताले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेछ। आगन्तुकका कारण अध्य’यनमा बा’धा पुग्न सक्छ। बुद्धि’को उपयोगले काम बन्नेछ। गुरुजनको सहयोगले लाभ उठाउन सकिनेछ।
Nextकोरोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको यी हात, जसले सबैले बनायो भावुक
रवि लामिछानेको आज जन्मदिन: यस्ता छन् धेरैलाई थाहा नभएका उनका जीवनका आरोह-अवरोह
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखलाई ज्यान’ मा’र्ने ध’म्की
सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस् (61730)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (59955)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (51777)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50369)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46280)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (45818)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (37951)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33480)
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको सुनको भाउ (31515)
विवाहपछि श्वेता र विजयन्द्रको पहिलो टिकटक ,भिडियो भयो भाईरल, लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुस्) (31239)
अनिताको हातगोडानै चल्न थालेपछि उनको उप’चार गर्ने डाक्टर पहिलोपटक मिडियामा (भिडियो सहित)
जग्गाधनी विदेशमा, मालपोतका अधिकृत र सुब्बा मिलेर बेचिदिए थान-कोटको जग्गा…